Lammiin Oromoo bakkuma jiruti diina isaa ajeesa jiru irrati humana qabuu fi meesha of harka qabuun gumaa ijoolee isaa ba’uu qaba.
Maarster Pilanin ama kun ittifufuinsa Karroora siirna nafxanya wagoota 130 Oromoo lafa isaa irra buqisuu kan ittifufedha. Ini kun garuu Oromoon Mootummaa utuu qabu mirga isaa seera of irra molqee Habashoon akka Oromoo lafa isaa irra buqisan hayyama keenaafi jira kana kan goodhe amoo Mootumma Nannoo Oromiyaa fi Miseensoota Cafee Oromiyaa bara 2015ti. Mootummaa mirga isaa seeran of irraa fudhee diina isaaf keenuu amoo Mootummaa Oromiyaa obbo Muktar Kedirin Oganamuu qofaa argine.
Maaster Pilanin akkasi biyaa kamituu akkasiti hin hojeetamuu kun lafa Oromoo samuuf kan qoopha’ee qoofa. Oromiyaan Master PilaninNaannoo Finfinnef kan mata ishee bara Obbo Alemayo Atomsa Prezdanti Turan qoophefate turte. Oromiyan Magaloota Nannoo ishee Master Pilani qoophefachuu qabdi.
Muxannoo adunya ilee kanuma Magalan Gudiitin Belgium Brussels lafa Metera tokko ilee nannoo isheeti ofti dabaltee hin beektuu. Belgium Umurii wagoota 1000 keessati balini isaa 32,61 km² qoofadha. Finfinne garuu wagoota 100 keessati 527 km2 babalatee jirti ama amoo lafa Oromoo 1, 100,000km fudhachuuf deemuu. Umani Oromoo Maaster Pilani fi Seera Cafeen Oromiyaa wayee Magaaloota Oromiya atataman ragasisee 100% ykn gutuumatu mormaa jira. Mootumman biyyan bulchaa jeedhe sagalee uumata dhageefatee seera sun lachanuu haquu qaba.
Mootumman Naannoo Oromiyaa fi Cafeen Oromiyaa goochaa raawwii Maaster Pilani fi Seera dhiyoo kana Cafeen raggasisen mirga Oromoo gutuman gututi diinaf dabarsan laatee jira. Seeri tokko Cafeen kan ba’uu mirga uumata kabachisuu akkasumas gudiina umata shafsisuuf malee kota lafa nura fudha, kota Magala keenya nura fudha, kota Ango Uumani keenya Oromiya irrati qabuu fudha jeedhe nami seera hin basuu, Nannoon Tigiray, Amharan, SNNR fi Ogadenti seera akkasi hin bafane. Ergami caafeen seera kana atataman guyya tokkoti baseef malii jeedhamee ilaalamuu qaba:-
1. Akkuma Jeedhame Tigroon Biyya Tigiray seeran ala dhufan Oromoo buqisan Magaloota Oromiyya keessati qabatan Angoo akka qabata hayamuuf,
2. Maqaloota Gurguda qama Federali akka to’atuu kara banuuf jeecha Tigiroon seera kana qoophesan akka cafeen mirkanesuu goodhamee;
3. Magaloota hunda keessa Afaan, Adda fi Safuu (Enyummaa Oromoo) qulqulessan basuu barbaduu;
4. Bulchinsa Magaloota Ama Harika Oromiyya jiruu tofta kana Oromoo irra fudhachuuf;
65. Qabxileen seera kana keessati caqasaman hundi mirga Oromoo kan molqani fi mirga qubatoota Tigire kan kabachisa ta’ee TPLFn qoophayee kan cafeef keenamedha;
Labisiin Wayee Maaster Pilani fi Seeri wayee Magaaloota Oromiyaa halkan tokkoti qoophefamee raga’ee kun Seera Federala biyyati kan diigee fi Ethiopia ilee diiguu kan danda’uu dha. Sababan isaa Sabooni kun Walkabajan federeshiin waliin buluuf waada isaan waliif galan kan cabsuu waan ta’eef.
1. Dangan Oromiyaa Seeera Federalan kabajameef cabsamaa waan jiruu;
2. Heerii Oromiyaan Finfinnee irraa bu'aa addaa argatti jedhamee waggaa 20 dura kan barreeffamee ture hoji irraa waan oluu dideefi;
3. Oromoon mirga ofiin of bulchuu moolqamee seera of hin bafaneen akka buluu humanan dirqisfama waan jiruf;
4. Heera Federalzim adunya hunda kan wal hin fakaneef heera federalism hunda waan cabsuuf;
5. Adda, Afaan Oromoo, safuu fi Enyuuma Oromoo kan dhabamsisuuf karoorfatee waan ta’eef.
6. Angoo Mootumman Naannoo Oromiyya Oromiyaa irrati qabuu hunda kan molquu waan ta’eef.
Ogannoon TPLF waan isaa irrati yaadu dadhabatuu jira. Inis Finfinnen Oromiya hin kabajne, Finfinne Adda fi Afaan Oromoo hin dubanee, Finfinne wagoota 130 gutuu Oromummaa fi enyuma Oromoo baleessa jiruu, Finfinne of Oromiyya irra fayadamuu malee Oromiyaa fayadee hin beekne, Finfinnen basii tokko malee Bishan qulquluu Nyata, ibsa fi kara Oromiyaati fayadamtuu kana booda Bishan isheen Oromiyaa irra argatuu Summi iti ta’aa, Qooran isheen Oromiyya irraa argatuu mana hunda abida ta’ee guba, Nyatii isheen Oromiyya irra argatuu Sumayee ishee baleessa. Tigiroon Oromoo lafa isaa irra buqiisan Abba biyya ta’aan kun hundi guyya tokko lubu isaa irrati jirachisuu dhabu, ykn yakka hara TPLF dalagee hundati gaafatamuu.
Heeri fi Seeri Wayyanen TPLF qoophesite humana ummatati feetuu kun hundi isaa guyya tokko ni haqama, waan seera kana irrati hunda’uun murtefamee hundi ni haqama TPLF kana ilee beekuu dadhabdee. Heeri fi seeri seeran ala dhiiba dhaba tokkon mirkna’ee dhabba sun duuka bada. Kana malee amoo Ummani waliin jijrachuuf karrorfatee ilee wal amanta fi jalala waan hin qabneef caara argateen biyya mata isaa uumachuuf dirqama. Goochaan TPLF Oromoo irrati goocha jirtuu kun Miseensoota OPDO dabalatee Oromoo Federeshin soba Ethiopia keessa ba’uu qaba gara jeedhuti akka adeeman goocha jira.
Dhiigi Ijoolee Oromoo kun gummaa malee hafuu hin qabuu, Baratoota qoofati dhisuu utuu hin tanee Oromoon hundi ijoolee isaa irrati loluu qaba, Qoote bulan, Hojeetan mootummaa fi daldalan ka'iii !!!
Umaani Oromoo hundi, Miseensoota OPDO dabalatee Sochii Baratoon Oromoo gegesa jiran kana Tumsa goochun duka akka hirira batan isiin gaafadha, kun gaafi haqa, gaafii mirga uumata Oromoo waan ta’eef Oromoo kan ta’ee hundi falmii kana irrati akka hirmatan isiinti dhamachaa. Baratoota Oromoo waan dandessan hundan, Nyata, dhugati gargaruu, Gejiban yeeroo isaan barbadan keenuuf, bakka deeman hundati Tumsa akka gootanfin uumataa Oromoo Kabajan Gaafachaa, Lammiin Oromoo bakuuma jiruti diina isaa biraa jiru irrati humana qabuu fi meesha of harka qabuun gumaa ijoolee isaa ba’uu qaba. Annalee Oromiyaa hunda fi mana barumsa hunda keessati lubun ijoolee Oromoo TPLFn ajeefama jiru kun waan caalifne irra dabaree Tigire waliin waliin jiranuu ta'uu hin qabuu. Dhiigi ijoolee Oromoo akkasi dhagala’ee qabsoo isaan egalan dhaabbachuu hin qabu.